IWatermark + kunye ne-Instagram: Khusela kwaye wabelane ngeefoto zakho kunye nevidiyo | Iplum iyamangalisa
Februwari 7, 2021
iOS, iWatermark +, iindaba, iifoto, iqonga, kwama Press
IWatermark + kunye ne-Instagram: Khusela kwaye wabelane ngeefoto kunye nevidiyo yakho
I-Kailua-Kona, i-HI-iWatermark, yiNombolo 1 kunye nesixhobo sewatching kuphela esifumaneka kuwo onke amaqonga ama-4, i-iPhone / i-iPad, iWindows, i-Android kunye neMac. IWatermark + sesona sixhobo saziwayo kunye nesinamandla sokujonga izixhobo kuwo onke amaqonga.
Inguqulelo yakutshanje ye-4.1 yeWatermark + ye-iOS isebenza kunye ne-Instagram
“Kangangeminyaka bendixhomekeke kwiWatermark ukundivumela ukuba ndibeke ilogo yam kwimifanekiso yam kanye kwi-iPhone okanye kwi-iPad yam. Nangona kunjalo, iWatermark + ithatha le nkqubo iye kwinqanaba elitsha. ”
Cofa apha ukukhuphela iWatermark + ye-iPhone / i-iPad
Umphathi we-Plum Amazing uJulian Miller uthe "Ukuba wabelana ngefoto okanye ividiyo yakho emangalisayo nge-Instagram, i-imeyile, i-Facebook, iTwitter, njl. Njl. ” Uye wema kancinci, emva koko wongeza, "Isisombululo esilula kukutyikitya iifoto / iividiyo zakho ngokwedijithali usebenzisa iWatermark + usebenzisa iiwotshi ezibonakalayo kunye / okanye ezingabonakaliyo emva koko ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda inonxibelelwano olubonakalayo kuwe naphina apho iifoto / iividiyo zeWatermark zingahamba khona."
Cofa apha ukukhuphela ingxelo ehlawulelweyo yeWatermark + ye-iPhone / i-iPad
Uqhubeke uJulian Miller, "iWatermark + edityaniswe ne-Instagram yonyusa amandla kuzo zombini. IWatermark + ibisoloko ithandwa ziimodareyitha ze-Instagram kodwa le nguqulo yamva nje iya kubaluleka kubashukumisi be-Instagram, abasebenzisi kunye namashishini. IWatermark + iyaqhubeka ikukuphela kwenkqubo yokwenene yewotsermark yeOS. Ngeempawu ezingakumbi ezizayo .... ”
- Iindidi ze-watermark (ngasentla) ezifumaneka kwiWatermark + azifumaneki nakwezinye iisoftware.
-Ukwazi ukongeza ii-watermark ezibonakalayo kunye / okanye ezingabonakaliyo zahlukile kwiWatermark +.
Sebenzisa iWatermark + phakathi kwezinye iiapps njengolwandiso lokuhlela ifoto yeewatermark nayo yahlukile.
-Ukungenisa elizweni kuzo zonke iinkonzo zefu ezifana neDropbox, iCloud, iBhokisi, iDrayivu kaGoogle, i-OneDrive, njl.
-Ukuhambelana okuthe ngqo kunye nokugqibelela kokubekwa kwebatch kwiifoto ezinobungakanani obahlukileyo kunye nokuziqhelanisa. Yahlukile!
-Iitiles watermark kumfanekiso ofana neenkampani zemifanekiso yesitokhwe ukuqinisekisa ukuba ikhuselekile.
Usebenzisa i-EXIF, i-IPTC, i-GPS kunye nezinye iimetadatha njenge-Tag kwi-watermark yokubonisa ukubonisa imethadatha kwifoto yenye yezinto ezizodwa ezenza abafoti kunye nabathwebuli zithombe abonwabileyo.
Ezinye iintlobo ze-watermark ziyabonakala kwaye ezinye azibonakali. Zombini zisebenza ngeenjongo ezahlukeneyo. I-watermark ebonakalayo kulapho ubeke khona ilogo yakho okanye utyikityo okanye ikhowudi ye-QR kwifoto yakho. Iimpawu ezingabonakaliyo zenkcukacha ezifihliweyo kwifayile okanye kwimifanekiso yedatha usebenzisa i-steganography.
Nje ukuba wenze ii-watermark zakho zesiko zigcinwa kugcino kwaye zinokusetyenziswa ngempompo ukongeza uphawu lwakho kunye nezinye ii-watermark kuyo nayiphi na ifoto okanye ividiyo.
Umbhalo -Nawuphi na umbhalo kubandakanya imethadatha enesetingi yokutshintsha ifonti, ubungakanani, umbala, ukujikeleza, njl.
Umbhalo Arc - Itekisi kwindlela egobile.
Umzobo weBitmap -Umzobo uhlala uyifayile ye-png ebonakalayo njenge logo yakho, uphawu, uphawu lwe-copyright, njl njl.
umda - beka imida ekhethekileyo kwiifoto.
Umzobo weVector -Sebenzisa ngaphezulu kwe-vector ye-5000 eyakhelweyo (ii-SVG's) ukubonisa imizobo egqibeleleyo nakweyiphi na ubungakanani.
Ukuhlaziya - cofa ukongeza ubungakanani besiko njengewermarket kuyo nayiphi na ifoto.
Isihluzo seSiko - cofa ukongeza isihluzo sakho esenziwe ngokwezifiso njengewotshi kuyo nayiphi na ifoto.
QR Code -Uhlobo lwebhakhowudi enolwazi olufana ne-imeyile okanye i-url ekubhaleni oko.
utyikityo-Tyikitya, ungenise ngaphakathi okanye uskene utyikityo lwakho kwiw watermark ukusayina indalo yakho.
Metadata -Ukongeza ulwazi (njenge-imeyile okanye i-url) kwinxalenye ye-IPTC okanye yeXMP yefayile yefoto.
I-StegoMark -I-StegoMark yindlela yethu yobunini yokufaka ulwazi olufana ne-imeyile yakho okanye i-url kwidatha yomfanekiso ngokwawo. Inokubakho okanye ifihlwe ngegama eligqithisiweyo.
IWatermark + ikwanazo neefilitha zesiko onokuthi uzenze ngokwakho, hayi uluhlu oluqhelekileyo lwezihluzi olufunyenwe kuyo yonke iapp. Inokuphinda ikwazi ukukhulisa iifoto ze-Instagram kunye namanye amajelo asekuhlaleni.
IWatermark sisixhobo esikhethekileyo sobungcali kwiifoto ze-watermark kunye nevidiyo. Ixabiso elincinci, elisebenzayo, elikhawulezayo nelilula ukuyisebenzisa emva koko PhotoShop.
IWatermark yenzelwe ngokukodwa ukubonwa ngumfoti wezithombe kubafoti. Kubaluleke kakhulu kuye nakubani na owenza imidiya yoluntu njengoFacebook, Instagram, Twitter, njl.
* Iifoto zamanzi, iividiyo kunye nokwabelana kunye nokukhusela kwi-Instagram nakwamanye amajelo asekuhlaleni.
* Ukusetyenziswa kweelwatchark ezininzi kwiifoto (ze) okanye iividiyo (ii).
* Watermark enye okanye iifoto ezininzi kwi-batch mode.
* Isakhono sokuyila, ukugcina kwaye sisebenzise iindidi ezili-12 zeewatchark, ngaphezulu kakhulu kunalo naluphi na olunye uhlelo lokusebenza lwewatch. Iindidi ezili-11 zizonke zeitermark = I-9 ebonakalayo + 2 ezingabonakaliyo ezidweliswe ngezantsi.
Q: Yintoni iwatermark?
Q: I-watermarking isetyenziswa njani namhlanje?
-Ukuba iiFoto / iiVidiyo zihamba ngentsholongwane zibhabha zibaleka ngokungalandeleki kuzo zonke iindlela. Rhoqo, umnini / ulwazi lomdali lulahlekile okanye lilibalekile. Ukuba akukho watermark ke akukho ndlela yokwazi umenzi wefoto.
Q: Yintoni enokuyenza?
✔ Ukongeza iWatermark ngokufihlakeleyo, nokuba ifoto okanye ividiyo yakho iya phi, yeyakho.
Ngamaxesha onke, iWatermark enegama, imeyile okanye i-url ukuze indalo yakho inonxibelelwano olusemthethweni kuwe.
✔ Ukukhuthaza nokukhusela inkampani yakho, igama kunye newebhusayithi ngokwenza iWatermarking zonke iifoto / iividiyo ozikhuphileyo.
✔ Ngokulula, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngeeWatermark ezibonakalayo nezingabonakaliyo ezibonisa ukuba zenziwe kwaye zezakho.
Inguqulelo 4.6.1 Inguqulelo
-I-Instagram kunye neWatermark + yokudityaniswa okuphuculweyo. Iimodareyitha ze-Instagram kunye nabasebenzisi abanzima be-Instagram baya kuzonwabela izinto ezongeziweyo. Ukwabelana nge-Instagram kusebenzisa izinto ezininzi ze-Instagram. Inkxaso yevidiyo engcono ye-Instagramming: iividiyo ezinde zikhutshwa ngokuzenzekelayo kwi-60sec leyo ngumda wangoku obekiweyo kwi-instagram.
-Utyikityo lwew watermark! ("Skena" kunye ne "Khetha" iindlela eziphuculweyo)
-Izilungiso ezimbalwa zolwimi lwesiNgesi
Ukuphuculwa kwesisombululo sevidiyo
-Ukulungiswa kwewatchermarking yevidiyo kwii-watermark bug
- Ukhetho olutsha longeze "…" iqhosha… ukuya ngqo kwimvume yokuSebenza kweNkqubo yeWatemark +
-Ukuphazamiseka abantu abambalwa ababekhethe isihluzo silungisiwe.
Isoftware yePlum emangalisayo namhlanje ibhengeze u-4.6.1 weWatermark + ye-iOS. Ukudityaniswa okuphuculweyo kunye ne-Instagram. Yongeza ukubonwa ngokugqibeleleyo kwevidiyo ye-4K. IWatermark + kuphela kwesixhobo sewermarking esifumaneka kuwo onke amaqonga ama-4, i-iPhone / i-iPad, i-Android, iiWindows kunye neMac. IWatermark + yeyona nto ibalulekileyo ekusetyenzisweni kweewermarking kubafoti abaziingcali kwezeshishini kunye nokuzisebenzisa. Batch okanye ukuqhubekeka ngokulandelelana. Isalamane kunye nokukhula ngokupheleleyo. Indawo yogcino lwazo zonke iisampulu kunye neew watermark zomsebenzisi ezikhoyo ngempompo. Iindidi zeemveliso zamanzi zibandakanya, isicatshulwa, iGrafiki, iVector, isicatshulwa kwiArc, ikhowudi ye-QR, ukutyikitywa komda, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, isihluzo sesiko, imethadatha kunye nesteganographic.
Ulwazi, iDowload kunye neeKhonkco zoMzobo
I-30 sec yevidiyo
I-Plum emangalisayo, i-LLC yinkampani eyimfihlo ebekelwe ukwenza i-Mac, Windows, i-Android kunye ne-iOS. IPlum Amazing ngumboneleli wehlabathi wesicelo sedesktop kunye nedesktop ukusukela ngo-1995. IPlum Amazing yenza kwaye ithengise isoftware ngeyayo, iiwebhusayithi zikaGoogle kunye neApple kodwa yenza nomsebenzi wophuhliso (wenkqubo) wezinye iinkampani kunye nabaxhasi ngakumbi kwindawo yokufota. IPlum Amazing yenza iimveliso ezinkulu ezinjenge CopyPaste, iWatermark, yKey, iClock, TinyAlarm, TinyCal, PixelStick, SpeechMaker, PhotoShrinkr, Volume Manager kunye nezinye. IPlum emangalisayo idale iView, iSearch, iCount, iClock, iWatermark, iKey nezinye, kwakude kudala ngaphambi kokuba iapile yenze i-iPod, iMac, iPhoto, njlnjl. Copyright (C) 2021 Plum Amazing. Onke Amalungelo Agciniwe.